अनुहारको छाला चम्किलो बनाउन प्रयोग गर्नस यि घरेलु औषधीहरु – ईमेची डटकम
अनुहारको छाला चम्किलो बनाउन प्रयोग गर्नस यि घरेलु औषधीहरु
Posted byईमेची डेक्स September 28, 2019 October 23, 2019 Leaveacomment on अनुहारको छाला चम्किलो बनाउन प्रयोग गर्नस यि घरेलु औषधीहरु
आज हामी तपाइहरुलाई अनुहारको छाला कसरी चम्किलो बनाउने भन्ने बारेमा केही घरेलु औषधीहरुको जानकारी दिन गइरहेका छौं ।
घ्यूकुमारी घ्यूकुमारी छालामा दल्नाले छाला तलको रक्त शुद्धीकरण हुन्छ । अनुहारमा घ्यूकुमारी दल्नाले डन्डीफोर, चिलाउने, छाला सुन्निने, छाला फुस्रो हुने आदि समस्या पनि कम हुन्छ । साथै घ्यूकुमारी लगाउनाले छालामा रहेका दाग बिस्तारै हराउँदै जान्छ ।
नीम छालामा रहेका टक्सिनलाई नीमले हटाउने गर्छ । साथै डन्डीफोरलाई पनि हटाउँछ । यसका लागि नुहाउनुभन्दा आधा घण्टाअघि पानीमा नीम पत्ता हाल्नुपर्छ र त्यही पानीले नुहाउने गर्नुपर्छ ।
बेसार सुन्दर बन्न छालामा बेसार दल्ने चलन धेरैतिर छ । बेसनमा बेसार र चन्दन मिसाएर छालामा दल्ने गर्नाले छाला सफा र चम्किलो बन्दै जान्छ । दूधमा एक चिम्टी बेसार मिसाएर दिनहुँ खाने गर्नाले छाला राम्रो हुँदै जान्छ ।
चन्दन छालामा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थलाई चन्दनले हटाउने गर्छ र छालालाई सफा, चम्किलो राख्छ । चन्दनलाई नरिवलको तेलमा मिसाई शरीर मसाज गर्नाले पूरै शरीरको छाला सफा हुन्छ र शरीरलाई आराम मिल्छ ।
गुलाब गुलाबमा भिटामिन–सी प्रशस्त पाइन्छ । त्यही भएर गुलाबजल सुत्नुअघि अनुहारमा दल्नाले डन्डीफोर, पोतोलगायत छालाका समस्या कम हुन्छन् र छाला चम्किलो बन्छ ।
काठमाडौं । जाडो महिना सुरु हुनासाथ कयौं मानिसहरु आफ्नो छालाको समस्यालाई लिएर चिन्तित हुने गर्छन् । जाडोमा प्राय पुरुषभन्दा महिलाहरु आफ्नो छालालाई लिएर बढी चिन्तित हुने गर्छन् । तर, यी समस्याहरुलाई घरमा नै रहेका केही उपायहरु अपनाए समाधान गर्न सकिने छ । ब्यूटी एक्सपोर्टका अनुसार घरम रहेका सामाग्रीहरुको प्रयोगले पनि फेसीयल जसलाई २ वा ३ पटक प्रयोग गरी अनुहारको ग्लो बढाउन सकिन्छ ।
१. दही र बेसारको फेस प्याकः एक चम्चा बेसार र एक चम्चा दही मिसायर अनुहारमा लगाउनुहोस । १५ मिनेट पछि अनुहार धुनुहोस् यसले छालामा निखार ल्याउँछ ।
२. बेसार र महको फेस प्याकः मह र बेसारमा थोरै गुलाब जल मिसाउनुहोस् । यसलाई आफ्नो घाटी र अनुहारमा लगाउनुहोस । यसले अनुहारको रिङकल्स हटाउँछ ।
३. आलु र दहीको फेस प्याकः एउटा आलुलाई मिक्सरमा हालेर धुलो बनाउनुहोस् र त्यसको धुलो एक चम्चा र एक चम्चा दही मिसाउनुहोस् । यसरी तयार पारिएको पेस्टलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् । १५ मिनेट पछि धुनुहोस् । छालाको रङ्ग नै बद्लीने छ ।
४. महको फेस प्याकः एक चम्चा महमा २ चम्चा पानी मिसाउनुहोस् । त्यसलाई राम्रोसँग घोलेर अनुहारमा लगाउनुहोस र केही समयमा धुनुहोस् । यसले तपाइको छालामा निखार आउने छ ।
५. गाजर फेस प्याकः २ वटा गाजरलाई घुलो बनाएर त्यसमा आधा चम्चा मह मिसाउनुहोस् । त्यसलाई आनुहारमा १५ मिनेटसम्म राखेपछि पानीले धुनुहोस् ।
६. बेसार र चन्दनको फेस प्याकः थोरै बेसार र चन्दन मिसाउनुहोस् । यसले अनुहारमा २ देखि ३ मिनेटसम्म मसाज गर्नुहोस । १० मिनेट पछि अनुहार धुनुहोस् । यसो गर्दा अनुहारको चमक बढ्ने छ ।
Posted byईमेची डेक्स September 28, 2019 October 23, 2019 Posted inस्वास्थ्य जिवनशैली